TicWatch Pro: Ilay fiambenana miaraka amin'ny WearOS sy fampisehoana roa | Androidsis
Mobvoi dia orinasa sinoa izay manao anarana tsikelikely eo amin'ny tsenan'ny smartwatch. Ny orinasa izao dia manolotra ny smartwatch fahatelo hatreto. Ity no TicWatch Pro, izay miaraka amin'ny WearOS ho toy ny rafitra miasa. Izy io dia ilay fitaovana vaovao an'ny marika sinoa, izay ny mampiavaka azy dia ny efijery faharoa izay manampy amin'ny fitsitsiana bateria.
Misaotra azy io, amin'ny fotoana tsy ampiasain'ny mpampiasa ny endri-javatra marani-tsaina an'ny WearOS, dia ampandehanana ny efijery faharoa amin'ity TicWatch Pro ity. Io dia hamonjy ny ain'ny bateria. Ny famantaranandro dia mety haharitra hatramin'ny 30 andro.
Ny smartwatch dia misy Efijery lehibe OLED, mampiseho an'i WearOS. Na eo ambony aza dia hanana efijery LCD mangarahara FSTN. Ity efijery ity dia hampiseho antsipiriany toy ny ora, ny tsindry bokotra na ny dingana, ary koa ny fampahalalana bebe kokoa rehefa maty ny efijery lehibe.
Amin'ny fotoana rehetra hikasihan'ny mpampiasa ny efijery famantaranandro, ity efijery ambany FSTN LCD ity dia ho faty ary hanjary mangarahara tanteraka. Ary ny efijery OLED lehibe an'ny TicWatch Pro dia hovelomina. Misaotra an'ity fampiasana mitambatra ity ny bateria dia haharitra roa andro. Na dia misy an'io aza mode ilaina izay mamela ny bateria haharitra hatramin'ny 30 andro, tsy mampiasa afa-tsy ny efijery fitsitsiana herinaratra.
Midika izany fa Mihidy i WearOS amin'izao fotoana izao ary tsy afaka mampiasa afa-tsy fiasa toa ny dingana manisa ianao, mahita ny fotoana sy ny refin'ny fo. Ary ny mpampiasa dia tsy ho afaka hanao na inona na inona amin'io lafiny io amin'ny resaka personalization. Anisan'ireo asa hafa ato amin'ity TicWatch Pro ity isika mahita Bluetooth, WiFi ary NFC hahafahana mandoa mitovy amin'izany.
Ny TicWatch Pro dia hamely ny tsena tsy ho ela, na dia tsy manana daty manokana momba izany aza izahay. Momba ny vidiny, Voamarina fa 300 $ eo ho eo izany. Tsy mbola manana ny vidiny farany ho an'ny tsena eropeana isika. Hihaona aminao tsy ho ela izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » TicWatch Pro: Ny fiambenana miaraka amin'ny WearOS izay maharitra 30 andro
Ny horonan-tsary fampiroboroboana ny BlackBerry KEY2 vaovao dia voasivana